Sidani Waa Maxay!! SHEEKADII Xiddigaha Atletico Madrid Ay Xalay Barcelona Ku Xanteen & Wixii Ay Aadka Ula Yaabeen Oo La Ogaaday – Laacibnet.net
Sidani Waa Maxay!! SHEEKADII Xiddigaha Atletico Madrid Ay Xalay Barcelona Ku Xanteen & Wixii Ay Aadka Ula Yaabeen Oo La Ogaaday
Atletico Madrid ayaa xalay guul 1-0 ah ka gaadhay dhigeeda Barcelona oo kusoo booqatay gegida Wanda Metropolitano balse sida ay haatan warar cusubi sheegayaan waxa jirtay arrin kale oo xiiso badan oo qolka labiska kooxda martida loo ahaa ka dhacday.
Kooxda tababare Diego Simoene ayaa ahayd mid ka baahi badnayd oo waliba ka fiicnayd mida Ronald Koeman walow ay kaliya 1-0 ku guuleysteen.
Goolkii uu Yannick Carrasco meesha fog ka laagay kaddib markii uu kubadda ka dhex saaray lugaha Marc Andre Ter Stegen oo kusoo baxay ayaa noqday midka kala duwanaanshaha sameeyay.
Wadar ahaan iyo waaxid ahaanba, Atletico Madrid ayaa ahayd mid ka gacan sarreysay Barcelona iyagoo ku guuleystay inta badan kubaddaha 50/50-ga ah isla markaana soo muujiyay ka go’naansho badan.
Arrinta kale ee soo jiidashada leh ayaa ah in xataa xiddigaha Atletico Madrid ee keydka fadhiyay ay ahaayeen kuwo kulanka diirada saaraya waxaana taas caddayn u ahayd in Diego Costa uu kursiga keydka kaga soo qayliyay garsooraha kulanka.
Haddaba, sida uu haatan sheegayo wargeyska Marca ee fadhigiisu yahay magaalada Madrid, arrinta ay xiddigaha Atletico Madrid gaar ahaan xiddigaha waaweyn ee kooxdaasi la yaabeen ayaa ahayd isbedelka ku dhacay Barcelona.
Marca ayaa sheegaya in qolka labiska Atleti lagaga sheekaysanayay sida ay u liidato Barca iyadoo xiddigaha hore mudada dheer ula soo xifaaltamayay ee kooxdaasi ay lama filaan ku noqotay nooca koox ee ay wajaheen.
Lionel Messi ayaan soo qaadan kulan wanaagsan isagoo 23 jeer kubadda lumiyay. In Diego Simeone oo 10 sano ku dhawaad Atleti jooga uu markii ugu horreysay kulamada horyaalka La Liga garaacay Barca ayaa sheegaysa sida ay hoos ugu dhacday kooxdaaso.